2CaSO4 → 2Acao + O2 + 2SO2
chlorate sodium chloride sodium Oxygen
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2NaClO3 → 2NaCl + 3O2
Waa maxay xaalada falcelinta NaClO3 (sodium chlorate)?
Dhacdada ka dib NaClO3 (sodium chlorate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2NaClO3 → 2NaCl + 3O2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaCl (sodium chlorate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaCl (sodium chloride) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (sodium chlorate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?
Koloriinta sodium; Aashitada Chlorous acid cusbada chloride sodium Oxygen
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NaClO2 → NaCl + O2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NaClO2 (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt)?
Dhacdo ka dib NaClO2 (Sodium chlorite, cusbada sodium chlorous acid)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada NaClO2 → NaCl + O2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaCl (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaCl (sodium chloride) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (Sodium chlorite; Chlorous acid sodium salt)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?